ပြည်သူ့ဘုန်းဘုန်း: သန္ဓေ တောထွက် ဓမ္မစက် ဟောမြွက်ခါကို လ၀ါဆို
သန္ဓေ တောထွက် ဓမ္မစက် ဟောမြွက်ခါကို လ၀ါဆို
၁၇. ၀၇. ၂၀၀၈ နေ့သည် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်။
၀ါဆိုလပြည့်နေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် နေ့ထူးနေ့မြတ် တစ်နေ့ဖြစ်သည်။
ဘုရားအလောင်းတော်မြတ် သန္ဓေယူသောနေ့၊ ဘုရားအလောင်းတော် တောထွက်တော်မူသည့်နေ့၊
ဓမ္မစကြာတရားဦး ဟောကြားတော်မူသည့်နေ့တို့မှာ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ရှေးမြန်မာကြီးတို့က သန္ဓေ တောထွက် ဓမ္မစက် ဟောမြွတ်ခါကို လ၀ါဆို။ ဟူ၍မှတ်တမ်း
၀ါဆိုလပြည့်နေ့သည် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့မှာ ဥပုသ်သီလဆောက်
တည်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းကန်များသို့သွားရောက်၍ အလှုအတန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ၀ါဆိုပန်းကပ်လှူ
မြတ် စွာဘုရားရှင်၏ ဖြစ်တော်စဉ်များနှင့် ဆက်စပ် မူရှိသည့်ဝါဆိုလပြည့်နေ့တွင် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအားလုံး ရောက်ရာအရပ် ကနေ အကုသိုလ်အမူများကို ရှောင်ရှားနိုင်ကြပြီး။ ကုသိုလ်ကောင်းမူများကို
တိုးပွားအောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ၊စိတ်ကောင်းမွေးနိုင်ကြပြီး အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်အကျိုး
ကိုဆထက်ထမ်းပိုး ရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဟု ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့သည် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့၌ သီလဆောက်တည်ခြင်း ဒါနပြုလုပ်ခြင်း တရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်၍ ကုသိုလ်ယူခြင်း စသောကောင်းမူများကိုပြုလုပ်ကြရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
လယ်တီဆရာတော်ကြီး ရေးစပ်တော်မူခဲ့သော ကဗျာစုများ…..
သုံးလူရှင်ပင်၊ ကျွန်ထိပ်တင်၊ သောင်းခွင်းစကြာဝဠာ၊ နတ်ဗြဟ္မာတို့၊ ညီညာရုံးစု၊
တောင်းပန်မူကြောင့်၊ ရတုနဂို၊ ရွန်းရွန်းစိုသည့်၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ ကြွက်မင်းနေ၀ယ်၊
ချမ်းမြေ့ ကြည်ဖြူ၊ သန္ဓေယူသည်၊နတ်လူငြိမ်းဖို့ကိန်းပါကို။
ဖွားမြင်မြောက်သော်၊ ဆယ့်ခြောက်နှစ်ရွယ်၊ ပျိုနှနယ်၌၊ သုံးသွယ်ရွေ္ဌနန်း၊ သိမ်းမြန်းပြီးလစ်၊
ဆယ့်သုံးနှစ်လျှင်၊ ဘုန်းသစ်လျံလူ၊ စံတော်မူ၍၊ ရွယ်မူနုဖြိုး၊ နှစ်ဆယ့်ကိုးဝယ်၊ လေးမျိုးနိမိတ်၊
နတ်ပြဟိတ်ကြောင့်၊ ရွေ္ဌစိတ်ငြင်ငြို၊ သံဝေပိုက၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ ကျားမင်းနေ့ဝယ်၊ ချမ်းမြေ့ရဂုံ၊
တောရပ်လှုံသည်၊ စုံမြိုင်ပင်ရိပ်ခန်းမှာကို။ ။
ဘုရားဖြစ်ခါ၊ မိဂဒါသို့၊ စကြာရွေ္ဌဖွား၊ ဖြန့်ချီသွား၍၊ ငါးပါးဝဂ္ဂွီ၊ စုံအညီနှင့်၊ မဟီတစ်သောင်း၊
တိုက်အပေါင်းမှ၊ ခညောင်းကပ်လာ၊ နတ်ဗြဟ္မာအား၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့ဝယ်၊ ကြွေ့ကြွေ့လျှံတက်၊
ဓမ္မစက်ကို၊ မိန့်မြွတ်ထွေပြား၊ ဟောဖော်ကြားသည်၊ တရားနတ်စည်ရွမ်းတယ်ကို။
Posted by Ashin dhamma at 9:12 AM